၁၉၄၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီအချိန်က လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ဖွင့်လှစ်ကာ သဘာဝဘေးကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၄၈ ခုနှစ် တွင် ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ပညာရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာန အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်သို့လည်းကောင်း ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် အမျိုးသား စည်းရုံးညီညွှတ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ စနစ်သစ်အုပ်ချုပ်ရေး ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာနအား ဖျက်သိမ်းပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့မှ လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ကြီးဌာနအား လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ပြင်ဆင်၍ မီးသတ်ဦးစီးဌာနအပါအဝင် ဦးစီးဌာန(၃)ခု ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့တွင် မီးသတ်ဦးစီးဌာနအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဌာန လက်အောက်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနဟူ၍ ဦးစီး ဌာန(၂)ခုသာ ရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်းအင်အား အခြေအနေမှာ အရာထမ်း(၂၆၅)ဦးနှင့် အမှုထမ်း(၂၈၇၆)ဦး စုစုပေါင်းအင်အား(၃၁၄၁)ဦးရှိပါသည်။ ထို့နောက် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် ခရိုင်ရုံးနှင့် သင်တန်း ကျောင်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများလိုအပ်သဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအင်အားများ ထပ်မံ တိုးမြှင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၊ ၃၁.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်း အင်အားအခြေအနေမှာ အရာထမ်း(၆၂၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၃၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၄၉၃၄)ဦး ရှိပါသည်။
၁.၄.၂၀၁၅ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဝန်ကြီးရုံးနှင့် ဦးစီးဌာနများ၏ဖွဲ့စည်းပုံများကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဝန်ထမ်း အင်အား အခြေအနေမှာ အရာထမ်း( ၆၂၀)ဦး၊ အမှုထမ်း(၄၃၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်းအင်အား (၄၉၃၄)ဦးသို့လည်းကောင်း၊ ၁၀.၃.၂၀၁၆ရက်နေ့တွင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံအားထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့သဖြင့် အရာထမ်း(၆၂၄)ဦး၊အမှုထမ်း(၄၆၃၂)၊စုစုပေါင်း(၅၂၅၆)ဦးသို့လည်းကောင်းရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် ၆.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏အင်အားများထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအင်အားအခြေအနေမှာအရာထမ်း(၁၉၆၅)ဦး၊ အမှုထမ်း(၁၄၆၁၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၆၅၇၉)ဦးထိရှိခဲ့ပါသည်။
၃၁.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာန၏ အမည်အား ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနဟု အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝန်ကြီးဌာနတွင် မူလရှိသည်‌့ အင်အားများအနက် ဦးစီးဌာန(၂)ခု၏ အင်အားများမှ ထုတ်နှုတ်၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသဖြင့် ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းအင်အား အခြေ အနေမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
ဝန်ကြီးဌာနစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှစ၍ယနေ့ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဝန်ကြီး များနှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁. ဦးဘေစာ ၇.၉.၁၉၅၃ မှ၂၇.၂.၁၉၅၉
၂. သတိုးမဟာသရေစည်သူသီရိသုဓမ္မဦးလွန်းဘော် ၂၇.၂.၁၉၅၉ မှ၄.၄.၁၉၆၀
၃. ဦးဘစော ၄.၄.၁၉၆၀ မှ ၂.၃.၁၉၆၂
၄. ဗိုလ်မှူးကြီးစောမြင့် ၅.၃.၁၉၆၂ မှ၃.၁၂.၁၉၆၃
၅. ဗိုလ်မှူးကြီးမောင်လွင် ၃.၁၂.၁၉၆၃မှ၂၄.၃.၁၉၇၀
၆. ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဖေ ၂၄.၃.၁၉၇၀မှ၁၄.၁၁.၁၉၇၀
၇. ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းဒန် ၁၄.၁၁.၁၉၇၀မှ၄.၃.၁၉၇၄
၈. ဦးဗန်ကူးလ် ၄.၃.၁၉၇၄ မှ ၃.၃.၁၉၇၈
၉. ဦးမန်းစံမြတ်ရွှေ ၃.၃.၁၉၇၈ မှ၂၀.၃.၁၉၇၉
၁၀. ဦးမြမောင် ၂၀.၃.၁၉၇၉မှ၂၈.၁.၁၉၈၀
၁၁. ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အုန်း ၂၈.၁.၁၉၈၀မှ၁၆.၁၀.၁၉၈၀
၁၂. ဗိုလ်ချုပ်ချစ်လှိုင် ၁၆.၁၀.၁၉၈၀မှ၉.၁၁.၁၉၈၁
၁၃. ဦးအုန်းကျော် ၉.၁၁.၁၉၈၁မှ၁၈.၉.၁၉၈၈
၁၄. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ရဲကျော် ၂၀.၉.၂၀.၉.၁၉၈၈ မှ၉.၂.၁၉၈၉
၁၅. ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်း ၉.၂.၁၉၈၉ မွ ၁၉.၂.၁၉၉၂
၁၆. ဗိုလ်မှူးချုပ်သောင်းမြင့် ၁၉.၂.၁၉၉၂မှ၁၅.၆.၁၉၉၅
၁၇. ဗိုလ်ချုပ်စိုးမြင့် ၁၅.၆.၁၉၉၅မှ၁၅.၁.၁၉၉၇
၁၈. ဗိုလ်မှူးချုပ်ပြည့်စုံ ၁၅.၁.၁၉၉၇မှ၂၉.၁၀.၁၉၉၉
၁၉. ဗိုလ်ချုပ်စိန်ထွား ၂၉.၁၀.၁၉၉၉မှ၁၄.၅.၂၀၀၆
၂၀. ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ဆွေ ၁၅.၅.၂၀၀၆ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၁
၂၁. ဦးအောင်ကြည် ၃၁.၃.၂၀၁၁မှ ၂၇.၈.၂၀၁၂
၂၂. ဒေါက်တာဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင် ၇.၉.၂၀၁၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၂၃. ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ၁.၄.၂၀၁၆ မှ ယနေ့ထိ
ဝန်ကြီးဌာန စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှစ၍ ယနေ့ထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ကာလမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
၁. ဗိုလ်မှူးကြီးဗန်ကူးလ် ၁၃.၅.၁၉၅၃ မှ ၃.၃.၁၉၇၈
၂. ဦးခင်ညိမ်း ၃.၃.၁၉၇၈ မှ ၁၇.၆.၁၉၈၀
၃. ဦးပေါ်ခန်သန်း ၁၇.၆.၁၉၈၀ မှ ၁၄.၁၀.၁၉၈၃
၄. ဦးကျော်သန်း ၁၄.၁၀.၁၉၈၃ မှ ၅.၁၁.၁၉၈၅
၅. ဦးပေါ်ခန်သန်း ၅.၁၁.၁၉၈၅ မှ ၁၇.၂.၁၉၉၃
၆. ဦးဝင်းနိုင် ၁၇.၂.၁၉၉၃ မှ ၁၆.၁၁.၁၉၉၅
၇. ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်ကြည် ၁၆.၁၁.၁၉၉၅ မှ ၁၀.၅.၂၀၀၁
၈. ဦးလှိုင်ဝင်း ၁၀.၅.၂၀၀၁ မှ ၂၅.၈.၂၀၀၃
၉. ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်မြင့် ၂၅.၈.၂၀၀၃ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၁
၁၀. ဦးဘုန်းဆွေ ၃၁.၃.၂၀၁၁ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၀. ဒေါ်စုစုလှိုင် ၂၇.၈.၂၀၁၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၁၆
၁၀. ဦးစိုးအောင် ၂၇.၉.၂၀၁၇ မှ ယနေ့ထိ